NextMapping | Nkuzi ndi Oma nke ndi ahia
NextMapping™ maka Ndi Ochichi
Anyị kwụsiri ike na gig gig.
Solopreneurs na ndị ọchụnta ego bụ ọdịnihu ọrụ. Nchọpụta gosiri na ka afọ 2025 freelancers na ndị ọrụ nkwekọrịta ga-emejupụta akụkụ dị mma nke ndị ọrụ. Upwork chọpụtara na 47% nke ndị agadi 18-21 nweere onwe ha n'afọ gara aga. Ihe omuma a gosiputara na ndi ohuru o bula ndi mmadu na acho ibu onye isi ha, ha ga - eme ka ha nweta ezigbo oru nlezianya n’iru na oganihu.
Ma ị bụrụla ọchụnta ego na-aga nke ọma ma ọ bụ na-achọ ịpụ na Cheryl Cran na ndị otu ya na-enye usoro nchịkwa azụmahịa iji nyere gị aka ime nke ọma.
Ọ bụrụ na ihe dị mkpa, ma ọ bụrụgodị na nsogbu ahụ na-emegide gị, ị kwesịrị ime ya. ”
Ihe Omume Live
Anyị na-eme ihe omume ndụ kwa afọ maka ndị ọchụnta ego ebe anyị nyochara n'ime mpaghara ndị bụ isi iji gosipụta azụmahịa gị n'ọdịnihu. Nke a gụnyere teknụzụ na ihe azụmaahịa azụmahịa iji belata ma mee ka uto nke azụmaahịa dị mfe. Ndị ọkachamara na-ahụ maka ndị ọbịa gụnyere CIO, ndị ọkà mmụta sayensị omume, sayensị sayensị, akparamàgwà nke ndị ọkachamara ihe ịga nke ọma na ndị ọzọ.
NextMap ahịa gị maka mmụba ego
Onye obula nke meworo ka ihe di uku mee ya na enyemaka. Nnukwu ndị ọchụnta ego dị ka Richard Branson, Sara Blakely, Elon Musk, na Lori Greiner enweela ndị nkuzi nchịkwa na / ma ọ bụ onye njikwa azụmaahịa iji nye nghọta, echiche na onodu. A na-ahaziri NextMapping ™ maka ịchụ ndị ọchụnta ego mkpa gị pụrụ iche. Site na ajụjụ na nyocha anyị na-emepụta omenala 'Nextmap' maka gị na azụmaahịa gị. Anyị na-enye ọnwa 6 ma ọ bụ 12 ọnwa nchịkwa azụmaahịa.
Kwa Afọ NextMapping ™ maka ihe omume ndị ọchụnta ego
Otu ugboro n’afọ anyị na-ezukọta na ndị ọchụnta ego nwere ụdị echiche a na oge ichigharị azụ iji lekwasị anya na ịkọwapụta ihe na-esote gị dịka onye ọchụnta ego na ihe na-esote azụmahịa gị. Na emume mmepe nke ụbọchị 2 a, ị ga - anụ ya site na ndị ọdịnihu, ndị na - ekwupụta ihe, ndị oti ihe nka, ndị isi n'ọhịa echiche echiche na ndị nkuzi azụmaahịa ọkachamara. Will ga - ahapụ izigharị a jiri 'maapụ' nke omume, atụmatụ na nnukwu ebumnuche iji nyere gị aka ime nke ọma karịa ịkọ ọdịnihu gị n'atụghị egwu…. Will ga-eserese ya.
12 ọnwa mmemme ịtụnanya pụrụ iche
Soro onye guzobere anyị, Cheryl Cran site na iyi ndu ogologo oge otu ọnwa maka ọnwa 12 ma nweta ọdịnaya site na mmemme vidiyo, nkuzi azụmaahịa ọkachamara, ndebiri, ngwaọrụ na akụrụngwa efu. Will gha acho uzo ohuru iji zulite ahia gi site na ichota ohuru ohuru ohuru nke ochicho. Will ga-ejikọ ya na ndị ọchụnta ego ndị ọzọ dịka gị nke ga-ekerịta ihe nzuzo ha na ihe ịga nke ọma na mmụta ha mụtara.
Kpọtụrụ anyị ka anyị debanye aha gị